News - Dharka Madoow ee ugu Fiican ee Ilaalinta Qorraxdaada
Dharka Madoow ee ugu Fiican ee Ilaalinta Qorraxdaada
Dharka Indhoolayaasha ee loo yaqaan 'Roller Blind Fabrics' ayaa noqonaya qaabka ugu weyn ee loogu talagalay ilaalinta qorraxda warshadaha hadda jira. Iyada oo faa'iido u ah hawlgal sahlan, fayadhowr, cimri dherer dheer iyo ku habboonaan kara meelo kala duwan.
Sababo la xiriira baahida badan ee loo qabo badbaadinta tamarta iyo asturnaanta, Indhoolayaasha Madowga ayaa loo baahan yahay inta badan daaqadaha qurxinta. Waxay xannibi kartaa UV, yareynta kuleylka dabacsan ama waxay ka tarjumaysaa qoraxda, sidaa darteed waxay horseedi kartaa waxqabadka wanaagsan ee badbaadinta tamarta, tani waxay gacan ka geysaneysaa xakameynta dhaqdhaqaaqa.
Indhooleyaasha Madoow ee caan ku ah adeegsiga Cafe, xafiiska, guriga, abaaraha, qolka, iyo aagga ganacsiga. Waa mid aad u fudud in la rakibo oo la beddelo.
ETEX waxay naqshadeysaa naqshadaha ballaaran ee dharka madow ee indha shareerka ah ee tayada sare leh iyo muuqaalka dusha sare si ay ugu habboon yihiin suuqa looga baahan yahay.
Ballac: ballac ahaan 200-320cm, ballac ballaaran oo ballac ah ayaa la kulma shuruudaha kala duwan ee suuqyada kala duwan. Qalabka waxaa laga sameeyay 100% polyester ah, waxaan u adeegsanaa yareynta tayada sare leh iyo kiimikada nadiifinta ah ee loo adeegsado aaladda, tani waxay xaqiijineysaa cimri dheer iyo nabadgelyo caafimaad.
Si loo hubiyo tayada wanaagsan ee dharkayaga, ETEX waxay ka dhigtaa dharkayaga madow inay galaan kormeerka SGS ee loo yaqaan 'culus culus', AZO Free, PVC Free.
Soonka Iftiiminta: 5 darajo buluug ah
Waxaan sidoo kale u soo saari karnaa dharkayaga madow ee loo yaqaan 'Waterproof, Fire Proof', anti-bakteeriyada, anti-fugus, anti-boodhka, ka hortagga buuqa, jabaqda, qaababka lacagta sida macaamiisha loo baahan yahay.
Heerkayaga FR waxaa laga heli karaa BS 5869-1980, NFPA701
Dhammaan madmadowkeenna sidoo kale waxay DIY ka dhigi karaan abuurista midabbo cusub sidii ay u baahan yihiin macmiil kasta, midab kasta oo lagu arki karo wax-soo-saarkeena
Dharka indha-shareerka ee loo yaqaan "ETEX Blackout Roller Blind" ayaa ah mid aad u sareeya oo ku aaddan cabbirka iyo fadhiga, tani waa faa iidadeena udhexeysa, Waxaan u isticmaalnaa kiimikada la soo dhoofiyo, waxay siisaa waxqabadka ugu wanaagsan ee lagu laalaado dharka madoow.
Qiimahayagu waa mid tartan maxaa yeelay waxaan intii karaankeena ah ku dadaalnaa inaan xakameyno qiimaha hab kasta oo aan macaamiisha u siino qiime cadaalad ah dharka ugu hufan.
Qiimaha UV Block: 100%, Heerka Madoow: 100%
Milicsiga iftiinka: 45%, Gudbinta kuleylka: 10%
Qalabka lakabka: Acid Acid